Dimy arivo Ariary ny sandany, manomboka amin’ny 7ora maraina ha hatramin’ny mitataovovonana. Anosizato I sy II, Anosipatrana atsinanana, Ampangabe ary Ilanivato no hosahanina amin’io. Ny tsikafona sy ny loto manentsina ny tatatra no asa hatao. Ny kendrena eto dia fanadiovana hialana amin’ny fiakaran’ny rano. Raha ny zava-misy amin’ireo toerana ireo anefa, tsy dia manary rano intsony ny tatatra fa sady miha tery no misy manao trano ka ka mora miakatra ny rano. Mila fotodrafitrasa maharitra sy mateza ny eny an-toerana fa tsy mety ny vonjy tavanandro. Porofon’izany ny eny Ilanivato Andavamamba izay tsy maintsy ampiasana sarety tanana ny fitaterana rehefa fahavaratra toy izao.